Achọpụta ihe dị iche iche nke ugu - Ugu - 2019
Ụdị siri ike na nkọwa na foto
Peculiarities nke ike ugu iche
Ugu - onye na-anọchite anya ube ezinụlọ. Omenala a di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche, ihe uto, udi nke nkpuru. Ihe ndị a na-ama ọdịiche dị iche iche nke pumpkins atọ:
nutmeg (nke a na-ahụ maka mkpụrụ osisi ma ọ bụ mkpụrụ osisi cylindrical na nro nro);
nnukwu-fruited (ji adụ jikọrọ ọnụ);
akpụkpọ anụ (dị iche iche nke na-esi ísì ụtọ na mkpụrụ osisi ma ọ bụ mkpụrụ osisi).
Ọ dị mkpa! Muscat iche iche site na elu ọdịnaya nke carotene na sugars, nnukwu-ike pumpkins na-ji elu zaa, na durum-ugu, ọ bụ ezie na usụhọde ke zaa, ma tupu nchekwa.
Ihe dị iche iche nke hardwood (Cucurbitapepo L.) nwere ike ịdọpụpụta ihe na-eme ka ọ dị elu, nke na-eme ka ọ dị mita 7. N'otu oge ahụ, enwere mkpụmkpụ, ụdị ohia. Tinyere ha ka ha tinye akwụkwọ ndụ ise-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo. Okooko nke akwukwo nri a na-eme ka ohia mara mma ma o bu agba odo. Pedicle pubescent na oké. Mgbe okooko osisi, a na-akpụ ovaries, nke, ka ha na-etolite, gbanwee ọdịdị, ụdị ogbugbo na agba. Ugboro ugboro, mkpụrụ osisi ahụ nwere atụgharị na-acha odo odo na agba odo odo na agba gburugburu.
Ọ dị mkpa! Isi nke ụdị dị iche iche bụ ntụpọ siri ike nke ugu, na ole na ole dị iche iche. Anụ nke ụdị ugu a bụ obere, ma ọ dị mma, na-esi ísì uto.
Mkpụrụ nke ude ma ọ bụ na-acha ọcha, oval-ekara, nke size size na -eche ihe dị 0,2 g dị n'etiti mkpụrụ. Otu ihe di iche iche - azu siri ike ma obu imi aka. Kacha mma doughy ugu iche:
Ndị agha obodo;
Taa, na mpaghara Soviet na-esote, a na-eji ihe siri ike karịa 30 ụdị ugbo na-arụ ọrụ. Anyị na-ahọrọ ụdị kacha mma maka ndị chọrọ ịmalite ụdị nke ugu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị iche iche nke pumpkins maka ala oghe, mgbe ahụ ị kwesịrị ịṅa ntị na Golosemyanka - ị nwere ike ịkụ ya na mpaghara ọ bụla nke mba anyị. Na nlekọta kwesịrị ekwesị, ugu a na-eme ka ogologo oge dị, na-agbanye n'ọkụ dị iche iche. Akwụkwọ nke osisi ahụ dị nha, na-agbasasị ngwa ngwa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha obere ncha.
Ị ma? Ekwenyere na ebe omumu nke ugu - Mexico. Ọ bụ n'ebe ahụ ka ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara osisi osisi ugbo kachasị ochie, nke dị ihe dịka puku afọ asaa. Na-agbasa na kọntinent ndị ọzọ a na-enweta ugu mgbe nchọpụta nke America.
Mkpụrụ nke nwanyị Golomean dị n'ụdị oval, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ, nke dị nro na aka. Enwere ike iru ruo kilogram 6 nke ibu. Anụ ahụ bụ odo, ọ bụghị ụtọ na uto, ok na crispy. Mkpụrụ na-enweghị okwute siri ike, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara akwụkwọ, nwere vitamin bara uru E, B1, B2. Na nlekọta kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịmepụta 500 c / ha.
Utu di iche iche Freckle bu ugbo mbu ma echere ya maka oriri ogwu. Ọ na-etolite n'ụdị ohia, na n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ ga-enwe 5-6 obere lashes ma belata internodes. Ufodu na etiti bu kwa ogologo uzo.
Epeepe na Freckles bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo, nke ọkara dị arọ dị ka pentagon siri ike. A na-ekpuchi ihu ha na-acha ọcha.
Mkpụrụ nke dịgasị iche iche dị ntakịrị - 0,6-3 n'arọ. Ha bụ ndị na-acha akwụkwọ ndụ na-acha acha odo odo ma na-acha odo odo ma nwee ọdịdị dị mma. Achịcha ahụ bụ oké ọkara, leathery, bee-acha akwụkwọ ndụ na agba.
Anụ nke freckles bụ edo edo-acha odo odo na agba, ọkpụkpụ nke ịkpụ bụ 3 cm. Ọ dị iche na juiciness, delicate na sweetish (6.5% shuga ọdịnaya) detụ ire na ekpri ekpari ekperi.
Na ememe nke agrotechnical norms, ọ ga-ekwe omume iji nweta mkpụrụ nke ugu dịgasị iche iche Freck 365 centent kwa hectare, nke dị ọtụtụ iri na abuo karịa ndị ọzọ iche pumpkins.
Ugboro ala na-ezo aka na mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ na mmiri, na-eguzogide ọgwụ na-agbanwe agbanwe, dị nnọọ transportable na ogologo echekwara. Ihe na-adịghị mma nke Freckles na-agụnye nsogbu ya na ọrịa ọrịa.
Isiokwu n'etiti oge oge ugu. Na-atụ aro maka ịgha mkpụrụ na ugbo ala. Danae na-etolite ọtụtụ lashes. Agba ụcha nwere ike ịbụ ìhè na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ.
Mkpụrụ nke dịgasị iche iche bụ gburugburu-oval, elu na-smoothed. Anụ mkpụrụ nke mkpụrụ osisi chara acha bụ nke na-acha uhie uhie, nke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na-acha odo odo. Anụ ahụ na-acha odo odo, ọ dị ntakịrị, ma na-enwe obi uto. Onu ogugu nke mfri mfri bu 6 n'arọ.
Ọnụ nke Danae bụ kilogram 360 / ha.
Ugu a bu oge etiti oge. O nwere mkpụrụ osisi oval na-ebu ihe dị ka kilogram 4.5 nke agba odo-acha odo odo na ezigbo ntụpọ. Anụ ahụ dị nro, ihe na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ nke ọma na ntakịrị okpukpu vanilla.
Kwesịrị ekwesị maka ịmalite na mpaghara dị iche iche, kọmpat, anaghị eburu ohere dị ukwuu n'elu akwa. Echekwa echere, atọ ụtọ maka ọnwa anọ. Na-eme ka ugbo ala - 460-610 c / ha.
Oge ugbo etiti oge, n'oge oge chara acha na-etolite ihe mgbagwoju anya. Mkpụrụ osisi dị iche iche, dịka oval. Akwukwo uzo nwere ike iru ruo n'arọ ise.
Achị nke mkpụrụ osisi chara acha bụ odo-agba mmanụ, dị mma na aka. Anụ ahụ bụ odo, uto ahụ dị ebube. Ọ bụ osisi kọmpat, dị mfe maka ịmalite na obere ebe. Dị ka Ume Achịcha, A na-edozi Orange na-edozi ya mgbe ọ na-ewe ihe ubi ma na-eguzogide ọgwụ ọjọọ na ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma.
Utu di iche iche nke Pumpkin na-ezo aka na tebụl mbụ. Na usoro nke uto na-adọta ọtụtụ ogologo lashes.
Mkpụrụ osisi gbara gburugburu, ụdị ziri ezi. Akwukwo ugbo bu obere - aka 4 kilo. A na-agbazi elu ahụ, oroma na egbukepụ doro anya nke ụcha jupụtara na ya. The pulp bụ ok, kemmiri ihe, banyere 3 cm oké. Na-arụpụta ihe - 450 kg / ha.
Okpokoro okpokoro okpokoro dị iche iche (ihe karịrị ụbọchị 98 gafere tupu owuwe ihe ubi mbụ).
Na-emeso mkpụrụ osisi na-acha n'oge mbụ ma kwadoro ya maka ịkụ ihe na ebe obibi ugwu. Mkpụrụ osisi ndị a na-amị mkpụrụ nke ugu a bụ ndị na-ebugharị, na-emepụta akwa ma ruo kilogram 4.8. Ụcha nke peel bụ mmanụ ọcha na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ngwakọta ahụ siri ike ma dị mkpa. Anụ ahụ na-acha odo odo na njirimara ugu ekpomeekpo. Ọtụtụ mgbe toro Gribovsky ugu seedling usoro. A na-ekelekarị maka ịghara ịgbasa n'ubi ahụ, anaghị ewepụta ohere dị ukwuu, na-eguzogide ọgwụ na ire ere ma na-emetụta bacteria bacteria na powdery mildew. Onu ogugu nke ugbo Gribovsky bu 400 c / ha.
N'ileghari anya na ihe omuma nke ugu, otutu ndi n'echebara ihe ndi di iche iche anya. Nke a bụ kpọmkwem ihe ome osisi almọnd nke dị n'etiti. Nke a na omenala ogologo lashes, mkpụrụ nke nwere uka nke 4-5 n'arọ. Iberibe osisi almond gourd na agba odo. Anụ anụ ahụ dị egwu, dị ụtọ na kemmiri. Ezigbo maka nri nwa na nri. Ekele maka ihe nwere ike ịnọgide na ogologo oge na-enweghị mgbalị dị ukwuu.
Kwa ụtụtụ na-eto eto. Na usoro nke uto na-ebuli ogologo oge nkwụsị.
Mkpụrụ nke a ugu na-ribbed, gbara ya gburugburu. Agba - odo na ebe ocha. Mkpụrụ nke mkpụrụ osisi chara acha dị 2.5-5 n'arọ. Anụ ahụ dị mma (5-6%), ụbụrụ, odo. Alka ugu na-arụpụta ihe, na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide ọgwụ, echekwara ya nke ọma mgbe owuwe ihe ubi gasịrị.
Na-ezo aka na mposi, akpa pumpkins. Differs na ọdịdị nke nwa ebu n'afọ, nke o nwetara aha ọzọ - acorn. Mkpụrụ ahụ dị ntakịrị, mana anụ ahụ nwere ụtọ uto. Agba nke pulp - ìhè edo edo, ọ fọrọ nke nta na-acha ọcha, masịrị dị ka zukini. Mkpụrụ osisi n'onwe ya nwere ike inwe ụdị dị iche iche dị iche iche. A na-ahụkarị ya na agba agba ndụ akwụkwọ ndụ (Table King and Table Queen). Ufodi di iche iche na-abata na ncha edo edo ma obu monochromatic oroma.
Ị ma? Enwere ike ịchekwa ugu ọ bụla n'ime ebe gbara ọchịchịrị ruo ogologo oge, ma ịkpụ ugu n'ebe dị jụụ enweghị ike ịchekwa maka ihe karịrị ụbọchị 30.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụdị ugu dị iche iche na-enye ohere na-akparaghị ókè iji nweta nnwale nke osisi a. Ma ọ bụrụ na mgbaru ọsọ gị bụ ugu siri ike, mgbe ahụ, ọ ga - ebuli elu ma ọ bụrụ, mgbe ị na - ahọrọ, ịṅa ntị na nkọwa nke ụdị dị iche iche.
Calathea akwa safari: ilekọta foto na nzuzo
Esi mee ka goozberị jam: nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka na foto
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Nkọwapụta na foto nke iche iche ugbo sieum